လဒ ( ၆ ) ကောင် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Think Different » လဒ ( ၆ ) ကောင်
လဒ ( ၆ ) ကောင်
Posted by Foreign Resident on Dec 24, 2012 in Think Different | 45 comments
လဒ ( ၆ ) ကောင် ။
” ( ၂၃.၁၂.၂၀၁၂ )
လဒ ( ၆ ) ကောင် တွေ့ “
အင်္ဂါထောင့်က ခေါင်းလောင်းတော်အထက်ဖောင်းရစ် နေရာနဲ့
( ၃ ) ကောင်စီပါ ။
Reference and Credit to – မချိုဝေလွင်
ဆိုပြီး ဓါတ်ပုံ တွေ တက်လာတယ် ။
အဘ လို အယူသိပ်မသည်းတဲ့သူတောင် ၊
ဘာဂလို တိုတို ဖြစ်သွားတယ် ။
ရွာသူားထဲက နဲနဲ နားလည်တဲ့သူများ ရှိရင် ၊
Comment လေးတွေကလဲ ၊
နာဂစ် မှန်တိုင်းကြီး မတိုက်ခင် တစ်လကျော်ကျော် လောက်မှာ ၊
ရန်ကုန်ပတ်ဝန်းကျင် လင်းဒ တွေ ကျခဲ့ဘူးပါတယ် ။
တွံတေးဘက်မှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင် ဓါတ်ပုံသွားရိုက်ခဲ့ပါသေးတယ် ၊
Seven July Moe
ဗန်းမော်ဆရာတော်ကြီးပြောခဲ့တဲ့စကားကိုပဲ နိမိတ်ယူပြီးပြောရမှာပဲဗျာ ။
ရွေဟင်္သာကြီး ကျောင်းခေါင်မိုးမှာ လာနားတယ်ဆိုပီး နိမိတ်ယူခဲ့တာ ကြားခဲ့ဘူးပါတယ် ။
ဒီကောင်ကြီးတွေ နှစ်တိုင်း ဒီအချိန်ဆို လာနေကြပါ ။
ဒီရာသီဆို ဟိမဝန္တာ က နေ ဟိုး အင်ဒိုနီးရှားထိအောင် သွားပါတယ်။
အရင်တုန်းကလည်း ရွှေတိဂုံဘုရားပေါ်နားတာတွေ့ ဖူးပါတယ် ။
ဒီနှစ်ကြမှ ဘယ်လိုဖြစ်လို့ ဖွကြတယ်မသိဘူး။
ဘိုးတော်ဘုရား အမရပူရနန်းမှာ လင်းတနားတော့
အယူတော်မင်္ဂလာဦးနိုးသိတော့ နိမိတ်ကောက်ပညာနဲ့ ၊ ကောင်းတယ် ။
မကြာခင် သမီးကညာဆက်သတာကို သိမ်းပိုက်ရမယ်လို့ဟောတယ်။
ဒလ မြေဈေး တက်လိမ့်မည် ။
အခုလိုဠင်းတ နားခြင်း မနားခြင်းနဲ့ပတ်သတ်လို့ကတော့ ကျနော်အလိုတော့
ဘာအယူမှမရှိဘူးဗျာ။ သူဖာသာနားချင်းနား မနားချင်နေပေါ့
ငှက်ဘာကြောင့်နား ဆိုတဲ့မေးခွန်းကို ဖြေရရင်တော့ အတောင်ညောင်းလို့နား
မိမိယူဆချက်ကို ဆွေးနွေးလိုက်ပါတယ် ဘကြီးဖောရေ……….
အမှတ်မမှားရင်.. ၈၈ အရေးတော်ပုံမတိုင်ခင်က.. မြန်မာပြည်ထဲ.. ကောင်းကင်ပေါ်ကနေ.. ဧရာမငှက်ကြိးတွေပျံဝင်လာဖူးတယ်..။
ဘယ်ကဘယ်လို ပြုတ်ကျလာတယ်မသိ.. ဖမ်းမိသွားပြီး. အဲဒီခေတ်ကြေးမုံသတင်းစာထဲ ပါဖူးတယ်.။
အဲဒါကို.. ဆရာမင်းသိင်္ခက.. လဒမျိုးနွယ်တွေလို့.. အထောက်အထားနဲ့ပြောပြပြီး.. တိုင်းပြည်ပျက်မယ်/ပြောင်းမယ် ဟောတာပဲ..။
လဒဆိုတဲ့ငှက်ဟာ.. မြန်မာလို ငှက်သူတော်ကောင်းတဲ့..
ဘာတွေညာတွေတော့ မသိဘူး သူကြီးရေ..ဒါပေမဲ့ ..။ ဒီကောင်တွေက ဆောင်းတွင်းဆိုင်ရင် ဆောင်းခိုငှက်အဖြစ် အပူပိုင်းဒေသတွေကို လာတတ်တယ်ဆိုတာကတော့သိတယ်။ အရင်ကလည်း ဒီကိုရောက်ခဲ့ဖူးပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ အခုကျတော့ အထွဋ်အမြတ်ဖြစ်တဲ့ ရွှေတိဂုံစေတီတော်ဖြစ်နေတော့..နည်းနည်းထူးဆန်းသွားတာများလားမသိဘူး..။ နောက်သူကြီးပြောတဲ့အဆိုကို ကျွန်တော် ထောက်ခံတယ်။ လဒဆိုတာ သတ်မစားဘူး အသေကောင်ကိုစားတယ်။ ဒီတော့ သူက သူတော်ကောင်းပဲ။ တိရိစာ္ဆန်ရုံ မှာတွေ့ဖူးတဲ့ လဒခေါင်းဖြူကြီးတွေဆိုရင် ခံ့ခံ့ညားညား နဲ့ အတော်ကြက်သရေရှိပဗျ။ ဘာလဲ တိဘက်မှာဆိုရင် လူတွေသေရင်တောင် အသားတွေအလကားဖြစ် မှာဆိုးလို့ လဒစာကျွေးပြီးတော့ ကုသိုလ်လုပ်ကြတယ်ဆိုပဲ..။ ကျွန်တော်တွေးမိတယ်။ ကျွန်တော်သေရင်လည်း အဲဒီလို သုံးစားမရတဲ့ ခန္ဒာကိုယ်ကြီးကို သူများ အစာဝဖို့အတွက် လုပ်လိုက်တာမှ ပိုကောင်းမလားလို့လေ..။
ငှက်တွေကလဲ သူတို့အန်တရာယ်ကင်းအောင် မြင့်တဲ့နေရာ
ဘာမှ မဟုတ်ပါဘူး အဘ။ ငှက်ဆိုတော့ စိတ်ပါတဲ့ ဆီ ပျံပြီး စိတ်လာတဲ့ဆီ နားတာပါ။
လဒလည်း ငှက်ပါပဲ ။ ( ဥပါန်ဒန်ကြောင့် ဥပါတ်ရောက်တတ်တယ်။ )
စိတ်အစွဲမထားတာ အကောင်းဆုံးပဲ ။
အဟီး … တမနက်လုံး ဖွဘုတ်မှာလည်း .. ဒီအကြောင်းပဲ ပလူပျံနေကြတယ် … အတိတ်ဆိုလား နိမိတ်ဆိုလားပဲ .. အဟိ။ အဘရေ ကျွန်မကတော့ လင်းတမကလို့ ဒေါင်းပဲ နားနား … ဒါဟာ အထူး ဆန်းကိစ္စမဟုတ်ဘူးလို့ မြင်မိပါတယ် ။ ဒီလင်းတတွေက လူမြင်ချိန်မှာ လာနားလို့ .. ညဘက်တွေ ညဉ့်နက်ပိုင်းတွေ လာနားစေဦးတော့.. ဘယ်သူမှတောင် သိမှာမဟုတ်ဘူး …. ။
လူတွေများ ရယ်စရာပဲ ….. တစိတ်တအိတ်လုပ်ပြောကြတာ…. စုံပလုံစိနေတာပဲ ။ အသိဉာဏ်နည်းတဲ့ သတ္တဝါပဲ … ပျံရင်းသွားရင်း .. နားချင်တဲ့ နေရာနားမှာပေါ့ … ။ ဒါကို .. အတိတ်လိုလို ၊ နိမိတ်လိုလိုပြော .. ဟိုလူတွေတော့..ဘာဖြစ်တော့မယ် .. ဒီလူတွေတော့ .. ဘာဖြစ်တော့မယ် ထင်ကြေးပေးနဲ့ …. ။ လူတွေ သိပ်အားနေတယ် ထင်ပါရဲ့လေ …. အဟီး
ဘာပဲ ဖြစ်ဖြစ် ဒီပုံလေးက သမိုင်းတွင်တဲ့ ပုံလေးပေါ့ကွယ်..
(ခရပ်ဒစ်တူ – ဂေဇက်ရွာကြီး)
ဒီမှာကွာ လဒကာ လမွမ်းတည့်တော့လကွာ……. လဆွမ်းကပ်တော့လေလကွာ…… လဒကာကြီးရာ……
တည်မိတဲ့ ဘုရား လဒပဲနား နား ဆိုပြီး ဥပက္ခာပြုခဲ့ကြပါတယ်။
အခုလဲ ဥပက္ခာပြုနိုင်ကြဖို့ လိုပါတယ်။
ကိုယ့် လမ်း ကိုယ်ဆက်လျှောက်ကြဖို့ ပါ။
ဥပါဒဏ်ကြောင့် ဥပါဒ် မရောက်စေချင်ပါ။
အရင်က ဗဟန်း3လမ်းမှာနေခဲ့ပြီး
“ အောင်အတိတ်နဲ့ အောင်နိမိတ်ဆောင်စေ ”
” ရွှေတိဂုံဘုရား လဒနားက-တိုင်းခြားပြည့်ရှင် ခန် ့ညားလျှင်
ဖိုဝင်ဇော်ဂျီ-တပသီနှင့်ပြည်တန်ပတ္တမြား-ပေါ်ထွက်ငြားအံ့ ။ ”
ဆိုတာ အယူတော်မင်္ဂလာကိန်းအရ ပတ္တမြားအား
ပြည်တန်တယ်။ ပြီးတော့ အထွတ်အမြတ် လို ့သတ်မှတ်
ခဲ့ကြတယ်။ ဒီတော့ မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝှမ်း အသရေလွှမ်းမယ့်
ဇမ္ဗူဒိတ်အောင်နိမိတ်လို ့ပဲ ဖွင့်ဆိုနိုင်တယ်။
ဘုရားမှာ လဒနားရင် ဘာဖြစ်မလဲ။အခုအချိန် နကတ်အလိုအရ
ဒီဇင်ဘာ ၂၅ ကျော်ရင် အကောင်းတွေ ရောက်မယ်။ အခုကာလက
စနေနဲ့ပါပ စုံသက်ရောက်နေတဲ့ အချိန် ဖြစ်တယ်။ အခုနှစ်
ဇန်နဝါရီလ ၄ ရက်နေ့ရောက်ရင် မြန်မာနိုင်ငံ စတင်ပြီး
လွတ်လပ်ရေး ရရှိခဲ့တဲ့ ၁၉၄၈ တုန်းက ဂြိုလ်ခွင်တွေ အနေ
အထားအတိုင်း တစ်သွေမတိမ်း နီးပါး တူညီနေတဲ့ အချိန်ကို
ရောက်ရင် ဟိုတုန်းကလို မြန်မာနိုင်ငံ အစိပ်စိပ်အမွှာမွှာနဲ ့
ရောင်စုံသူပုန် ထလေမလား မစိုးရိမ်ပါနဲ ့။ ဂြိုလ်ခွင်တွေသာ
အရင်ပုံစံ ပြန်ခင်းမှာ ကံကြမ္မာက အရင်ပုံစံ ပြန်မလာဘူး။
မင်္ဂလာအလိုအရ ပိုမိုကောင်းမွန်မယ့် နိမိတ်တွေ ထွန်းနေတယ်။
ပြီးတော့ နားတဲ့ဘုရားက ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီး ဖြစ်နေတဲ့ အတွက် ရွှေတိဂုံစေတီတော်မြတ်ကြီးရဲ့တန်ခိုးအာနုဘော်ကို
လည်း ထည့်တွက် ရမယ်။
နှစ်တန့်မှာ ကသစ်ဥယျာဉ် ရတဲ့အတွက် မင်္ဂလာပေါ် မင်္ဂလာ
ဆင့်မယ်။ အကောင်းတွေ လာတော့မယ် ဆိုတဲ့ သဘောပဲ။
လူတွေက လဒ နားတာကိုသာ ပြောနေတာ။ ရွှေတိဂုံ ဖြစ်နေ
တာကို မပြောဘူး။ လဒဟာ ဗုဒဟူးနဲ့စနေ ပေါင်းထားတဲ့
အတွက် ဒီနာမ်ကိုပဲ ယူရမယ်။ လဒ ဘာကောင်ဆိုတာကို
ထည့်တွက်ပေမယ့် ဒီလောက်အထိ အရေးမကြီးတော့ဘူး။
လဒ နားတဲ့အချိန်ကိုလည်း ထည့်တွက်ရမယ့်။ ညနေစောင်း
ဖြစ်တဲ့အတွက် လဒရဲ့ မူရင်း သက်ရောက်မှုတွေ လျော့နည်း
သွားပြီဆိုတာလည်း သဘောပေါက်ဖို ့လိုတယ်။
အဓိပ္ပါယ် ကတော့ လူတွေ မသိနားမလည်ဘဲ လျှောက်ပြော
နေသလို မကောင်းတဲ့ အနက် မထွက်ဘူး။ အကောင်းထက်
အကောင်းဆင့်တဲ့ အနက်ကို အယူတော်မင်္ဂလာက ကောက်
“ရွှေတိဂုံဘုရား လဒနားက-တိုင်းခြားပြည့်ရှင် ခန် ့ညားလျှင်
– ဆိုတာ အယူတော်မင်္ဂလာကိန်းအရ ပတ္တမြားအား
– (အယူတော်မင်္ဂလာ ဖွင့်ဆိုချက်မှ) –
( လဒ – ဠင်းတဟုဖတ်ရန် )
အူး၄ အူးဖောရေ …..
ဒီငှက်ကြီးတွေကို White headed Vulture လို့ခေါ်မလားဘဲ ခပ်ဆင်ဆင်တူတဲ့ မျိုးစိတ်ပေါ့ များသောအားဖြင့် အာဖဂန် အနောက်တောင်ပိုင်းနဲ့ ဟိမဝန္တာတစ်ကြောမှာ နေလေရဲ့ … ရွာထဲက ဒတ်ပုံဆြာတစ်ယောက်တော့ ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ
မြင်ဖူးကောင်း မြင်ဖူးလိမ့်မယ်။ ဆောင်းခိုငှက်တွေရဲ့ သဘောအတိုင်း မိုင်ထောင်ချီပျံပီး အအေးဒဏ်ကို ရှောင်တဲ့ပုံစံပေါ့
လဒငှက်က သူတော်ကောင်းတော့ မဟုတ်ဘူး .. သူ့မှာက နှုတ်သီးအားဘဲ သန်တာ လင်းယုန်တွေ၊သိမ်းငှက်တွေလို သန်မာပီး အမဲလိုက်နှိုင်တဲ့ စွမ်းအားမရှိဘူး။ သူ့ရဲ့ အလေ့အထက သေခါနီး အားအင်မဲ့ပီး မတုန့်ပြန်နိူင်တဲ့ အရာတွေကိုပဲ အပိုုင်စောင့်ပီး စားတတ်တာ၊ စားရင်လဲ ကိုယ်တွင်း ကလီစာနဲ့ ဆွဲဖဲ့လွယ်တဲ့ အသားစတွေပဲ စားတယ်။ အကောင်ကတော့ ကြီးလေ ကြိုက်လေဘဲ …. ။
ဘာနဲ့ သွားတူသလဲဆိုရင် ပြည်ပရောက် မြန်မာနိူင်ငံရေးသမားတွေနဲ့ အလွန်ဆင်တယ်
အဲ့လာကို အတိတ်ကောက်ရရင် လဒ(၅+၇)=၁၂၊ ၁+၂= ၃ တတိယနိူင်ငံတွေက လဒတွေ ဒီရာသီ ဗကေးရှင်းရက်ရတော့
ဗုဒ္ဓဟူးနဲ့ စနေနံ ကတ်ကင်းကိုက်တဲ့ ရွှေတိဂုံကို(မြန်မာ) လာကြမယ်။ ရွှေတိဂုံမှာ အသေနံ မရှိဘူး၊ အဲ့တာကို သူတို့စောင့်ရင် အပျက်ကိန်း နည်းနည်းမြင်တယ်။ အနည်းဆုံး ဂေါပက(ဦးစီးဦးဆောင်တွေ) အဲ့လဒတွေကို ရှင်းရင်ရှင်း မရှင်းရင် ရှော့ရှိတယ်
မန်းဂေဇက်ထဲက လဒ(ကြီး၊သေး) ၆ကောင်လဲ သတိထားဖို့လိုကြောင်း
လဒ ကို ပြောင်းပြန်ယူတတ်ရင် ဒေါ်လာ လဲ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်လေ။
ဖြစ်နိုင်ရင် အစိမ်း တစ်သိန်း လောက်ပေးချင်ပါတယ်။
ကိုယ်ရော လဒ စာရင်းဝင်များ ဖြစ်နေမလား တွေးရင်း ပြုံးသွားပါတယ်။
ကျုပ်ရေးမယ်လို့ ရည်ရွယ်ထားတဲ့ ကော်မန့်ဖြစ်တဲ့အတွက်
သဂျီးရဲ့ ဓာတ်ပုံကတော့ ဆိုမာလီယာလား
ဗုဒ္ဓဟူးနံ ၆ ဂဏန်း.. စစ်မက်ဖြစ်ပွားခြင်းနဲ့ သက်ဆိုင်တယ်။
၆ဂဏန်းဟာ စစ်တိုက်ထွက်ခြင်း၊ ရဲစွမ်းသတ္တိနဲ့ဆိုင်တယ်..
အိုဘယ့်..ဗမာ . နှစ်တစ်ထောင်ကျိန်စာဟဲ့.. ..
ဒီဇင်ဘာလ ၂၃ရက် တနင်္ဂနွေနေ့ ညနေပိုင်းကနေ ဒီဇင် ဘာလ ၂၄ရက် တနင်္လာနေ့ မ နက်ပိုင်းထိ ရန်ကုန်မြို့၊ ရွွှှေတိဂုံဘုရားပေါ်မှာ ဠင်းတငှက် ၆ကောင် လာရောက် နားခိုသွားခဲ့တာလို ့မျက်မြင်တွေ ့သူတွေကပြော ပါတယ်။
ရွှေတိဂုံစေတီအထက်ပစ္စယံ အင်္ဂါထောင့်မှာ ၃ကောင်၊ရာဟုထောင့်မှာ ၃ကောင် လာရောက်ခိုနားသွားတာ ဖြစ် ပြီး၊ ရွှေတိဂုံဘုရားဂေါကပအဖွဲ့ရုံး ရုံးအဖွဲ့မှုး ဦးဝင်းကြိုင်ကတော့ ဠင်းတငှက်တွေလာရောက်ခိုနားမှုနဲ ့ပတ် သက်ပြီး ဆောင်းခိုငှက်တွေ လာနားသွားတာ ဖြစ် တယ်လို့ ဒီဗွီဘီကို ပြောပါတယ်။
နက္ထတဗေဒပညာရှင် စံဇာဏီဘိုကတော့ မြင့်မြတ်တဲ့ဘုရားပေါ် ယုတ်ညံ့တဲ့ငှက်လာနားတာ မကောင်းဘူးလို့ အတိတ် နမိတ်ကောက်ယူ ပြောပါတယ်။
ဘုရားဂေါကပဝင်အဖွဲ့ဝင်တဦးကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ ၃နှစ်လောက်တုန်းကလဲ အခုလို လာနားဘူးပေမယ့် ဘုရား ပေါ်မှာ နားတာ မဟုတ်ဘဲ ရင်ပြင်ပေါ်ကသစ်ပင်ပေါ် နားခိုခဲ့တာ ဖြစ်တယ်လို့ ပြောပါတယ်။
ခုလို ရွှေတိဂုံ ဘုရားပေါ်မှာ ဠင်းတငှက်တွေ လာရောက်နားခိုနေတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေနဲ့အတိတ် နမိတ်ကောက်ယူမှု ထင်ကြေး ပေးမှုတွေ ရန်ကုန်လူထုအကြားမှာရော လူမှုရေး ကွန်ယက် အင်တာနက်စာမျက်နှာတွေပေါ်မှာ ပါ ကျယ်ကျယ်ပြန် ့ပြန် ့ထွက်ပေါ်နေပါတယ်။
ရွှေတိဂုံစေတီတော်သို့လာနားသည့် ငှက်(၆)ကောင်အား ဟိမဝန္တာ လင်းတများ ဖြစ်ကြောင်း ငှက်အသင်းအတည်ပြု
ရွှေတိဂုံစေတီတော်သို့ လင်းတငှက် ၆ကောင် လာနားသည့် ဖြစ်စဉ်တစ်ခု ဒီဇင်ဘာလ၂၃ရက် ညနေ ၅ နာရီခန့်တွင်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့ ကြောင်းသိရသည်။ အဆိုပါငှက် ၆ ကောင် သည် ရာဟုထောင့်တွင်၃ကောင်၊ အင်္ဂါထောင့်နှင့် ဗုဒ္ဒဟူးထောင့်အ ကြားတွင် သုံးကောင်နားနေပြီး၊ ယင်းငှက်များမှာ ဟိမဝန္တာ လင်းတ (Himalayan Griffon) ဖြစ် ကြောင်း မြန်မာနိုင်ငံ ငှက်နှင့် သဘာ ဝပတ်ဝန်းကျင် ထိန်းသိမ်းရေး အသင်းမှအတည်ပြုခဲ့သည်။
”ဒီလိုငှက်ကြီးတွေ အရင် တုန်းကတော့မရောက်ဖူးဘူး။ ဘုရား ပေါ်မှာ ၂ကောင် ရှိသေးတယ် ၄ ကောင်က ပျံသွား တယ်။ ငှက်အသင်း ဒုဥက္ကဌ ဦးအောင်သိန်းကတော့ ဟိမဝန္တာက လာတဲ့ဆောင်းခိုငှက် လို့ပြော တယ်” ဟုရွှေတိဂုံ စေတီတော် ဂေါပကရုံးမှရုံအဖွဲ့မှူး ဦးဝင်းကြိုင်က ဒီဇင်ဘာ ၂၄ ရက်နေ့ နံနက်ပိုင်း တွင် ပြောသည်။
ငှက်နှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် အသင်းဥက္ကဌ ဦးစိုးညွန့်က ”ဒီလင်းတတွေဟာ မလေးရှား ကျွန်းဆွယ် စင်္ကာပူ အထိပျံသန်းတဲ့ ဆောင်းခိုငှက်တွေ ဖြစ်ပါတယ်။ အခု လိုရန်ကုန်မြို့ရဲ့ အအေးလွန်ကဲ တဲ့အချိန်တွေ မှာ လင်းတတွေ ကျရောက်လေ့ ရှိပါတယ်။ လေရဲ့ သဘာဝက ပူနွေးနေရင် အထက်ကိုပင့် တင်တတ်တဲ့ သဘောရှိပြီး အေးတဲ့အခါမှာတော့ မပင့်တင် တတ်ဘူး။ ဒီတော့ လေဟုန်စီးပြီး လိုက်လေ့ ရှိတဲ့ လင်းတတွေအတွက် အခက်အခဲ တွေ့ပြီးအခုလိုကျ ရောက်တာဖြစ်နိုင်တယ်။
နောက်တစ်ချက်က လမ်းခရီးဝေးလံပြီး အစာ ရေစာပြတ်လပ်တာရယ်၊ အရွယ်မ ရောက်သေးတဲ့ Juvenile အကောင် တွေဖြစ်တာကြောင့်လည်း အခုလိုဆင်းရတာ ဖြစ်ပါတယ်။ နှစ်တိုင်းလိုလိုမှာမြန်မာပြည်အနှံ့ အပြားကို လင်းတတွေ ဆင်းသက်တာ အစဉ်အလာ ဖြစ်ပေမယ့် အခုလို ရွှေတိဂုံ ဘုရားမှာ တွေ့ရတာကတော့ ထူးခြားမှု တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်” ဟု ပြောသည်။
“ရွှေတိဂုံစေတီတော်သို့လာနားသည့် ငှက်(၆)ကောင်အား ဟိမဝန္တာ လင်းတများ ဖြစ်ကြောင်း ငှက်အသင်းအတည်ပြု”
သူရို့ခမျာ ဟိမဝန္တာ ကနေပီးတော့ ရွှေတိဂုံဘုရားကို လာရောက် ဖူးမျှော်ကြတာပါ…ငှက်သူတော်ကောင်းတွေ လို့ ဆိုရမယ်… :hee:
ဘဖေါ အနော့်ဝါဒကတော့ ကံနှင့်ကံ၏အကျိုးပါပဲ ကောင်းတာလုပ်ရင် ကောင်းတာဖြစ် နေ့တိုင်းရက်ရာဇာ
မကောင်းတာလုပ်ရင် မကောင်းတာဖြစ် နေ့တိုင်းပြဿဒါးပေါ့ ….. ဒါနဲ့ ပို့စ်နဲ့မဆိုင်ပါဘူး ဘဖေါတင်ထားတဲ့ အနောက်တိုင်းသွား တောလား အားလုံးကိုကြိုက်တယ် ကိုယ်တိုင်အတွေ့အကြုံရသလိုပါပဲ အချိန်မရလို့ မမန့်ဖြစ်တာပါ
ရွှေတိဂုံဘုရားကိုလဒနားတာနောက်ဘာဖြစ်မလဲမသိဘူး..ဒါပေမယ့်သေချာတာတစ်ခုက Ye Thiha ပြောသလိုဒလမြေဈေးတော့တော်တော်တက်နေပြီ…
သေချာကြည့်လိုုက်သောအခါ ခေါင်းအနေအထား အနည်းငယ်သေး နေပါသောကြောင့် လဒ
ဟုုတပ်အပ်မပြောနုိုင်ပါကြောင်း သိုု ့သော်လဒ နှင့်အနည်းငယ်ဆင်နေ သဖြင့် လဒူဖြစ်နုိုင်ပါ
အဘဖော ဟောသလို ဒလမြေ ဈေးတက်အံ့ .. မှန်ခဲ့မယ် ဆိုရင် …
လောလောဆယ် အချိန်မှီ နိုင်သေးတယ်နဲ့ တူပါရဲ့ ….
ရှိစုမဲ့စုလေးနဲ့ အသာအယာ လုပ်ထားဦးမှ ….။
ကိုအောင်ပြောသလို လဒူ သာဖြစ်ခဲ့ရင်.. ကျူပ်လဲ လဒူ ဖြစ်ရတော့မှာ …
-အဘ လို အယူသိပ်မသည်းတဲ့သူတောင် ၊
ဘာဂလို တိုတို ဖြစ်သွားတယ် ။-
ထို လဒများကား ဦးမာဃမှ လူအများ၏ စိတ်ဓာတ်နှင့် ထင်မြင်ချက်များကို သိရှိရန် စေလွှတ်ခြင်းသာ ဖြစ်ပေ၏
အမှတ်မမှားရင်.. အမေရိကရဲ့..အထိမ်းအမှတ်…လင်းယုန်ထိပ်ပြောင်က.. လဒမျိုးနွယ်ပဲ..
မြန်မာပြည်နဲ့.. ယူအက်စ်.. ဆက်ဆံရေး ၆ဆင့်တက်ကောင်းမွန်မှာဖြစ်ကြောင်း..
အရင်စစ်အစိုးရခေါင်းဆောင်တွေ.. .မြန်မာပြည်နိုင်ငံရေးကထွက်ပေးပြီး.. အမေရိကားမှာ.. ပြောင်းရွှေ့.. အခြေချကြတော့မှာဖြစ်ကြောင်း..
အခုဟာက မြန်မာပြည်က လဒတွေ က အပြင်ထွက်တာမဟုတ်ဘူးလေ သူကြီးရဲ့။
အပြင် လဒတွေ က နိုင်ငံထဲ ဝင်လာတာ။
” ဗုဒ္ဓဟူးနံ ၆ ဂဏန်း.. စစ်မက်ဖြစ်ပွားခြင်းနဲ့ သက်ဆိုင်တယ်။
မကြာခင်.. စစ်ခင်းဖို့မြင်ပါတယ်… ”
မှန်တာပြောရရင် ၊ လူအများစုကြီးက ၊
သိပ္ပံခေတ်ကြီးမှာ အယူမသည်းကြောင်းပဲ ပြန်ပြောကြမှာ သိပါတယ် ။
ကိုရင် စည်သူတို့ ၊ မ Aye KK တို့ရဲ့ ဟောချက်လေးတွေကို
အဓိက ကြားချင်တာပါ ။
အင်္ဂဝိဇ္ဇာအချိန်စိတ်ခွဲခြင်းအရ စီးပွားဥစ္စာတွေ တိုးတက်ကြပါလိမ့်မယ်။
သွယ်ဝိုက်ခြင်းကတော့ မြန်မာပြည်သူတွေ အရင်ကထက်စာရင်
လူမွေးသူမွေး ပိုပြောင်လာမယ်။ ၃ကောင် နှစ်ဖက်ခွဲနားပြီး
ခြောက်ကောင်နားတဲ့ အတိတ်နိမိတ်က ပြည်တွင်း စစ်မျက်နှာနှစ်ဖက်မှာ
ကြီးကြီးကျယ်ကျယ် ထိခိုက်ပျက်စီးမှုတွေ ဖြစ်လာလိမ့်မယ်..။
တပ်မတော်ဂျီးမှ စစ်သားများ အိမ်ထောင်ဖက်များနှင့် အလွမ်းပိုထားသင့်ကြောင်းလေး…
ကြောင်းလေး.. သံချောင်းခေါက်ပါတယ်နော့.. :byaee:
ဆရာစံဇာဏီဘိုကတော့ ၂၀၁၃ မှာ စီးပွားရေးသမားတွေ သတိကြီးကြီး ထားကြပါလို့ ပြောထားပြန်တယ်။ :eee:
အယူမသီးဘူးဆိုတဲ့လူတွေ အလကား လူရှေ့ဟန်လုပ်နေတာ။ သူတို့အိမ်ရှေ့ လာနားကြည့်ပါလား။ နောက်တနေ့မနက် နေမထွက်သေးဘူး ဗေဒင်ဆရာဆီ ရောက်နေလိမ့်မယ်။ အယူတော်မင်္ဂလာ ဖွင့်ဆိုချက် “ရွှေတိဂုံဘုရား လဒနားက-တိုင်းခြားပြည့်ရှင် ခန် ့ညားလျှင်
ဖိုဝင်ဇော်ဂျီ-တပသီနှင့်ပြည်တန်ပတမြား-ပေါ်ထွက်ငြားအံ့” ခက်တာက တိုင်းပြည်မှာ ဘယ်သူ ပြည့်ရှင်မင်းမှန်း မသဲကွဲတာ။ ဦးသိန်းစိန်လား ဦးသန်းရွှေလား… တပ်ခြုပ်မင်းအောင်လှိုင်ကလည်း သွားကြီးတဖြဲဖြဲနဲ့ ချက်ကောင်းစောင့်နေတယ်…။
ဒီနေ့ပျက်ကျတဲ့ Air Bagan နဲ့ပါ ယတြာကျေပါစေလို့ ဆုတောင်းပါတယ်။
စကားမစပ် ဟက်ပီဘာ့သ်ဒေးပါ အဘဖော ရေ…
မွေးနေ့ရက်မြတ်မှသည် ကောင်းကျိုးချမ်းသာအဖြာဖြာနဲ့ ပြည့်စုံပါစေကြောင်း ဆုမွန်ကောင်း တောင်းလိုက်ပါတယ်။ :hee:
လဒကြီးတွေ ကိစ္စကတော့ နမိတ်ကောင်းတယ်လို့ ပြောတဲ့သူနဲ့၊
မကောင်းဘူးလို့ ပြောတဲ့သူနဲ့ ဘာတွေ ဖြစ်လာအုံးမလဲတော့ မသိဘူး။ :eee:
ဟက်ပီး ဘတ်ဒေးပါ လို့
မောင့်ကျက်သရေ ဂီ့ ၊ Ma Ma နှင့် Mr. MarGa ရေ ။
မွေးနေ့ ဆုတောင်းအတွက် ကျေးဇူးပါ ။
ဒီနှစ် ခရစ်စမတ် မှာတော့ Air Bagan ပျက်ကျသွားတယ် ။
အရင်လို ပျော်စရာ သိပ်မကောင်း လှဘူး ။
အဘတို့ မြန်မာပြည်ကြီးလည်း ၊ ခုတလော မပျင်းရဘူးနော် ။
မြစ်ဆုံ ၊ ဘင်္ဂါလီ ၊ ငလျှင် ၊ လက်ပန်တောင်း ၊ ကချင် ၊ လေယာဉ် ၊ စုံနေတာပဲ ။
အဲဒီလောက် တစ်ခုပြီး တစ်ခု ဆက်ပြီးဖြစ်နေတဲ့ ကြားထဲမှာ ၊
Comment တစ်ခုက ဗုဒ္ဓဘာသာနိုင်ငံဖြစ်ပေလို့သာ ကံကောင်းပြီး ၊
လေယာဉ်ပျက်ကျတာ နှစ်ယောက်ပဲ သေရတာ ဆိုပဲ ။
ဘာ ပြန်ရေး / ပြန်ပြော ရမှန်းတောင် မသိတော့ဘူး ။
လဒ နားဒါဒေါ့ သိဝူးးး
သူ့ဟာသူ ညောင်းလို့ လာနားတာ နေမှာပေါ့ ..
မွေးနေ့ဆုတောင်းအတွက် ကျေးဇူးပါ ၊ မဟာရာဇာ အံစာတုံး ရေ ။
အဘဖော က ခရစ်စမတ်နေ့မှာမွေးတာလား…. Belated happy birthday & Merry Christmas!!!!
မွေးနေ့ဆုတောင်းအတွက် ကျေးဇူးပါ ၊ Shwe Phyu ရေ ။
ဟုတ်ပါတယ် ၊ ကျနော်က ခရစ်စမါတ်နေ့မှာ မွေးတာပါ ။
happy birthday ပါ အဘ !
မွေးနေ့ဆုတောင်းအတွက် ကျေးဇူးပါ ၊ pooch ရေ ။
လေတွင်ပျံသောလဒ ၆ကောင် သည် အတောင်ညောင်းသောကြောင့် ဗုဒ္ဓဟူးနံရွှေတိဂုံဘုရားတွင် နားသောကြောင့် လေတွင်ပျံသော လေယာဉ်ပျံသည် ဆီကုန်သောကြောင့် သောကြာနံဟဲဟိုးမြို့၌ တောင်ပံကျိုးကာ လမ်း ပေါ်တွင်ရှိသော ယာဉ်အားတိုက် ၍ လူအသေအပျောက်ရှိလတံ္တ..။
တနည်း- လဒနားသောဗုဒ္ဓဟူးနံ ကမာ္ဘ့ရွှေဈေး ဒေါ်လာဈေး (လဒဒေါ်လာ) သည် အတက်အကျကြီးစွာဖြစ်လတ္တံ့။
တနည်း-ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်တို့၏ အထွဋ်အမြတ်ထားရာ ရွေတိဂုံဘုရားတွင်လဒနားသောကြောင့် သာသာနာကို ကြီးမားစွာဖျက်ဆီးရန်ကြံစည်သူများပေါ်လာလတ္တံ့။ သာသနာအား လဒနားသကဲ့သို့ယုတ်မာသောရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် သာသနာအတွင်းနားခိုဝင်ရောက်နေသူ ၆ဦးရှိလတ္တံ့..။ ၃ဦးစီ ၂နေရာခွဲနေလတ္တံ့..။